Daawo Sawirada: Nin Meydka Xaaskiisa la lugeeyay 12-km iyo sababta ku kaliftay oo la ogaaday - iftineducation.com
iftineducation.com – Warbaahinta Caalamka qaarkood ayaa si weyn u hadal haya dhacdo ka dhacday dalka Hindiya kadib markii Nin Sabool ah xaaskiisa oo Geeriyootay meydkeeda dusha ku qaatay 12-km.
Ninkan ayaa sheegay in uu awoodi waayay in uu gaari ku qaato meydka xaaskiisa si uu u geeyo tuuladii uu ka yimid una geeyo meydka xaaskiisa oo u geeriyootay Cudurka qaaxada ama TB.
Dana Majhi’s ayaa cudurka qaaxada ugu geeriyootay isbitaalka degmada ee magaalada Bhawanipatna iyada oo 42 jir ah, waxaana ninkeeda markii loo sheegay in ay dhimatay Xaaskiisa uu go’aansaday in uu dhabarka ku qaato.
Mahji oo ah Ninka xaaskiisa geeriyootay ayaa sheegay in Isbitaalka ay ku geeriyootay xaaskiisa uu ka waayay gaari Ambalaas ah ama gaari kale oo Meydka loogu qaado, waxa uuna intaa raaciyay in uusan awoodin in uu gaari u kireeyo kuna geeyo tuuladii uu ka yimid.
Maamulka Isbitaalka ay ku geeriyooyay Dana ayaa beeniyay eeda uga timid ninka xaaskiisa geeriyootay, waxa uuna sheegay Masuul katirtsan Isbitaalkaasi in ninkan xaaskiisa markii ay geeriyootay uu saalada Isbitaalka ka qaatay.
Dhacdadan ayaa si weyn looga hadal hayaa dalka Hindiya iyo meelo badan oo caalamka katirsan, waxa ayna dadka qaarkood eeda arintan dusha uga tuureen Maamulka Isbitaalka ay ku eedeeyeen in aysan saacidin dhibanahan.
Foodistaha Kooxda Liverpool Mario Balotelli Oo Doonaya In Uu Ku Biiro Kooxda Manchester United